YouTube မှ SEO Link ဖျော်ရည်
Youtube မှ Link ဖျော်ရည်ကိုဘယ်လိုရမလည်း
သောကြာနေ့, မတ်လ 4, 2011 စနေနေ့, မေလ 11, 2013 နစ်ခ် Carter က
တိကျသောသော့ချက်စာလုံးတစ်ခုအတွက် landing စာမျက်နှာများ၏ဆက်စပ်မှုကိုမြှင့်တင်ရန် Youtube ကိုမြှင့်တင်ရန်ကျွန်ုပ်သည်အောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
hyphen နှင့်ခွဲထားသော URL တွင်သင်၏သော့ချက်စာလုံးပါသောဆင်းသက်မှုစာမျက်နှာကိုဖန်တီးပါ။ ၎င်းသည်စကားလုံးများအားကွဲပြားခြားနားစွာရှုမြင်ရန် bot များအတွက်သင်ရည်မှန်းထားသောစကားစုနှင့်သင်၏ဆက်စပ်မှုကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။ ဒီဥပမာအတွက်ငါသုံးမယ် http://www.addresstwo.com/small-business-crm/
သင်ဤဆင်းသက်မှုစာမျက်နှာပေါ်တွင်သင်ထည့်သွင်းမည့်ဗွီဒီယိုတစ်ခုကိုဖန်တီးပါ။ SEO ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်၊ ဗွီဒီယို၏အကြောင်းအရာသည်အရေးမကြီးပါ ဒါပေမယ့်လူ့ရှုထောင့်ကကြည့်ရင်ဒီဗီဒီယိုဟာတကယ်ပဲသက်ဆိုင်မှုရှိပါစေ။ နောက်ဆုံးမှာ၊ ဒီဟာကငါတို့သွားနေတဲ့လမ်းကိုသွားမယ့်စာမျက်နှာပါ။
ဗွီဒီယိုကို Youtube သို့တင်ပါ သင်၏သော့ချက်စာလုံးသို့မဟုတ်စကားစုကိုဗီဒီယိုခေါင်းစဉ်အဖြစ်သုံးပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်၏ဗွီဒီယိုကို“ အသေးစားစီးပွားရေး CRM” ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသည်။
နောက်ဆုံးအနေနှင့်သင်၏ဗီဒီယိုဖော်ပြချက်တွင်သင်၏ hyperlink ကိုထည့်သွင်းပါ။
ဤဗွီဒီယိုကို Youtube ထုတ်သောအခါ၊ URL မှပုံစံနှင့်လိုက်ဖက်သောမည်သည့် string ကိုမဆို HTTP မှစတင်သည်၊ ထို URL နှင့်အလိုအလျောက်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ သင်ဒီမှာကျောက်ချစာသားကိုမကိုင်တွယ်နိူင်သောကြောင့် landing page ၏ URL သည်အရေးကြီးသည်။ Youtube သည်လိပ်စာကို hyperlink လုပ်ရန်သာဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် URL တွင်သင်၏သော့ချက်ဝေါဟာရရှိခြင်း ကျောက်ချစာသားသည်သင့်ရည်မှန်းချက်သော့ချက်စာလုံးပါ ၀ င်ကြောင်းသေချာစေသည်။ ဥပမာ - hyperlinked URL ကိုကြည့်ပါ ဒီ Youtube ဗီဒီယိုစာမျက်နှာ.
သို့သော်၎င်းသည်နောက်ဆက်တွဲ link မဟုတ်ပါလော။ ဟုတ်ပါတယ် သင်၏ URL ပေါ်တွင် Youtube ကိုထုပ်ပိုးထားသည့်ကျောက်ဆူး tag ကို rel =” no-follow” attribute တစ်ခုပေးလိမ့်မည်။ အဘယ်အရာကိုခန့်မှန်း: ဘယ်သူဂရုစိုကျ! w3 စံသတ်မှတ်ချက်အရ no-follow tag သည်ဆိုလိုသည်ဟုဆိုသော်လည်းသမိုင်းဝင်အချက်အလက်များသည်ကျွန်ုပ်အားထပ်ခါထပ်ခါပြသခြင်းမရှိသေးသောဤဆက်သွယ်မှုမရှိသောလင့်ခ်များသည်ရည်မှန်း URL ၏ဆက်စပ်မှုကိုတိုးမြှင့်စေကြောင်း ထပ်မံ၍ သက်သေပြခဲ့သည်။ In-post link ထက်ထိရောက်မှုနည်းသော်လည်း၎င်းသည်ထိရောက်မှုရှိသည်။
ဒါ့အပြင်ဒီစာမျက်နှာပေါ်ရှိ H1 tag မှာသင့်ရဲ့အဓိကဝေါဟာရပါရှိသည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့သော့ချက်ဝေါဟာရနှင့်သက်ဆိုင်သောစာမျက်နှာတစ်ခုသင့်ရဲ့အဓိကသက်တမ်းနှင့်အတူကျောက်ဆူးစာသားကနေတဆင့်သင့်ရဲ့ဆင်းသက်စာမျက်နှာကိုချိတ်ဆက်သင်၏စာမျက်နှာ။ လွယ်ပါတယ်!
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဤဗီဒီယိုကိုယခုချိတ်ဆက်ထားသည့် landing page တွင်ထည့်သွင်းခြင်းသည်အရေးကြီးသောနောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်သည်။ ဤ embedded video သည် Google ၏ bot အားစာမျက်နှာ၏ပါ ၀ င်မှုသည်လိုချင်သောအဓိကအသုံးအနှုန်းနှင့်အမှန်ပင်သက်ဆိုင်ကြောင်းပြောပြသည်။ အဘယ်ကြောင့်? အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် embedded video ၏ခေါင်းစဉ်တွင်ဤစာမျက်နှာသည်အဓိကပစ်မှတ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အခြား embedded flash အရာဝတ္ထုများသည် crawled မဟုတ်သော်လည်း Google bot သည် Youtube object ကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးဗီဒီယိုခေါင်းစဉ်ကို၎င်း၏ algorithm တွင်ထည့်သွင်းသည်ကိုကျွန်ုပ်ယုံကြည်စိတ်ချပါသည်။
Tags: website ရဲ့ backlinkyoutube ကyo seo
နစ်ခ် Carter က
နစ်ခ်ကာတာသည်အမှန်တကယ်ပင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူသည်စာရေးဆရာဖြစ်သည် ရန်ပုံငွေမတည်AddressTwo ကိုတည်ထောင်သူအဖြစ်လည်းကောင်း၊ အသေးစားစီးပွားရေး CRM ဆော့ဖျဝဲ ၎င်းသည်လုပ်ငန်းရှင်များအားသူတို့၏အရောင်းများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်နှင့်သူတို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက်ကိရိယာများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးသည်
Webtrends Demos Next Generation Analytics မှ
Google ရဲ့ "Panda" Algorithm ပြောင်းလဲမှုအပေါ်ကျွန်ုပ်၏အတွေးများ
မတ်လ 6, 2011 မှာ 6: 54 pm တွင်
ငါထောက်ခံချက်တစ်ခုလုပ်လိမ့်မည် - သင်၏အကြောင်းအရာကိုမဟုတ်ဘဲသင်၏အကြောင်းအရာရှေ့မှာတင်။ လူအတော်များများဟာ YouTube ဖော်ပြချက်တစ်ခုလုံးကိုချဲ့ထွင်ပြီးမဖတ်ကြဘူး။ link တစ်ခုကို ဦး စွာထည့်ခြင်းဖြင့်သင်၏ click-through နှုန်းကိုမြှင့်တင်လိမ့်မည်ကိုသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။
သြဂုတ် 8, 2011 မှာ 10: 01 AM
ဝိုး! ကောင်းတယ် မသိခဲ့ပါ! သို့သော်ကျွန်ုပ်၌မေးခွန်းတစ်ခုရှိသည်။ ဗွီဒီယိုတခုကိုမှတ်ချက်ပေးပြီးနောက်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုလင့်ခ်တစ်ခုထည့်ပါက၎င်းသည်သင်၏စီးပွားရေးအတွက်ဆိုးရွားပါလိမ့်မည်လော။ ဆိုလိုတာက google ကကျွန်တော့် site ကိုအပြစ်ပေးမှာလား။ မဟုတ်ရင်မကောင်းတာတစ်ခုခုဖြစ်လာနိုင်မလား။
မတ်လ 7, 2011 မှာ 2: 24 AM
ငါလွန်ခဲ့သောတစ်လကျော်ကဤအမှုကိုစတင်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်သာမကဖောက်သည်အများအပြားအတွက်မှန်ကန်သောရလဒ်ကောင်းအချို့ရရှိခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုအိတ်ထဲကထုတ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဟားဟား။
မတ်လ 7, 2011 မှာ 7: 13 pm တွင်
နောက်ထပ်လုပ်ရမှာကသင်၏ဗွီဒီယိုအကြောင်းအရာကိုကူးရေးရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် YouTube ရှာဖွေမှုတစ်ခုအတွင်းမြင်တွေ့ရခြင်းအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအခွင့်အလမ်းကိုပေးလိမ့်မည်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုခေါင်းပေါ်ပေးလိုက်တယ် http://speakertext.com သောသင်တို့အဘို့အအလုပ်၏အများကြီးမသောဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်ဆင်းသက်ရန်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ကူးရေးထားသောစာသားကိုထည့်ပြီးသင်၏စာမျက်နှာရာထူးကိုကူညီနေစဉ်လူမြင်ကွင်းမှဝှက်ထားနိုင်သည်သေချာသည်။ ဗွီဒီယိုကိုအမှန်တကယ်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့အစားအချက်အလက်တွေနဲ့အကြံဥာဏ်ကောင်းတွေ။
မတ်လ 7, 2011 မှာ 7: 16 pm တွင်
သတင်းကောင်း လူအများစုကဗီဒီယိုများခေါင်းစဉ်များသည်၎င်းတို့ကိုမည်သို့ကူညီနိုင်သည်ကိုနားမလည်ကြပါ။ Speaker Text ကဲ့သို့သော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြင့်၎င်းတို့ကိုကူးရေးရန်လည်းလေ့လာပါ။ ၎င်းသည်သင်၏ YouTube ၌ကူးယူခြင်းအားသင်၏ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာကိုလွယ်ကူစွာရှာဖွေရန်ခွင့်ပြုသည်။ သင်စာသားကိုယူပြီးသင်၏ဆင်းသက်သည့်စာမျက်နှာတွင်ထည့်ထားသော်လည်းမြင်ကွင်းမှဝှက်ထားနိုင်သည်။
မေလ 7, 2011 မှာ 3: 30 pm တွင်
အလွန်သိကောင်းစရာများသော post ကိုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏တစ်ခုတည်းသောမေးခွန်းမှာဗီဒီယိုအကြောင်းအရာများကိုဆင်းသက်သည့်စာမျက်နှာတွင်အဘယ်ကြောင့်ထပ်မံကူးယူခြင်းဖြစ်သနည်း။ လူများသည် YouTube ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်၊ အဓိကစကားလုံးများနှင့်ကိုက်ညီသောကွဲပြားသောသက်ဆိုင်သည့်အကြောင်းအရာများကိုအဘယ်ကြောင့်မသုံးသင့်သနည်း။ ဒီထက်ပိုပြီးမထိရောက်ဘူးလား။
မေလ 7, 2011 မှာ 4: 58 pm တွင်
ဆိုလိုတာက YouTube လိုဗီဒီယို hosting ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာရှာဖွေတာဖြစ်နိုင်တယ်။
သို့မဟုတ် YouTube မှဗွီဒီယိုကိုကိုးကားသည့်ရှေးရှေးမှတစ်ဆင့်။ သို့သော်အားမရ
ရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင် optionally ပြသသောဗီဒီယိုဘားတွင်။ အဖြစ်
ကောင်းပြီ၊ သင့်မှာလူမှုရေးနဲ့ PR ကွန်ယက်ကောင်းကောင်းရှိရင် - ဗွီဒီယိုတင်နေတယ်
သင်၏ဆင်းသက်သည့်စာမျက်နှာမှအကြောင်းအရာသည် ပို၍ ပင်အသွားအလာကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံး
စမ်းသပ်မှုများစွာတွင် landing page ရှိဗီဒီယိုတစ်ခုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်
သင်၏ landing page ရှိဗီဒီယိုသည်အကြောင်းအရာနှင့်သက်ဆိုင်မှုရှိမရှိသေချာစေပါ
မေလ 22, 2011 မှာ 10: 52 AM
မင်းရဲ့အထက်ဆောင်းပါးဟာဒီနေ့ငါဖတ်ခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးနှင့်အကျွမ်းကျင်ဆုံးကြည့်ရှုသူဖြစ်ပြီး You Tube hyperlink များအကြောင်းကိုအနည်းငယ်ဖတ်ဖူးတယ်။ ဖော်ပြခဲ့သောနံပါတ်တစ်ဗီဒီယိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်နှင့်အသစ်တိုးမြှင့်ခံထားရသောပိုင်ရှင်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာတို့၏ဆက်စပ်မှုသည်အလွန်ကောင်းပြီးအခြား SEO ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကမူသိပ်မတွေ့ရတော့၎င်းသည်ကျွန်ုပ်နှင့်သက်ဆိုင်ပြီးကျွန်ုပ်၏စျေးကွက်မဟာဗျူဟာတွင်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောနိဂုံးချုပ်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မတ်လ 28, 2012 မှာ 4: 28 pm တွင်
ဤသည်အလွန်ကြီးစွာသော post ကိုဖူးအငုံထွက်ခဲ့သည်။
ဇွန် 10, 2012 မှာ 7: 00 pm တွင်
17:2014 pm မှာနိုဝင်ဘာ 9, 32
မျှဝေခြင်းအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာအချက်နှင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဂူဂဲလ်သည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ရှာဖွေမှုအများစုကိုထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့်၎င်းသည်မတူညီသောပလက်ဖောင်းများပေါ်ရှိအကြောင်းအရာများနှင့်လင့်များရှိခြင်းသည် ၀ က်ဘ်စီမံကွပ်ကဲသူသို့မဟုတ်ဘလော့ဂါအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိစေမည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အင်တာနက်ပေါ်တွင်နေ့စဉ်နေ့စဉ် YouTube အသုံးပြုနေသည့်ကြီးမားသည့်အသွားအလာနှင့်အတူ၎င်းကိုအသွားအလာအတွက်အသုံးချရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနေရာမရှိပါ။
12:2015 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 11, 09
ဂရိတ် post ကို, အကြောင်းအရာချစ်ကြတယ်။ ငါစိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ sidebar ကိုချစ်တယ်၊ ကျေးဇူးပြု၍ သင့်တင့်တယ်လီဖုန်းလင့်ခ်ကိုပို့ပေးပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီး template နှင့် plugin ကိုရယူပါ
13:2015 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 3, 38
ငါတို့သုံးနေတယ် Superfly တုံ့ပြန်မှုရှိသော WordPress Menu Plugin ကို Codecanyon မှရနိုင်သည်။ ဤအခင်းအကျင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသောမူရင်းအခင်းအကျင်းဖြစ်သည်။
22:2015 pm မှာဇွန် 5, 43
ကံမကောင်းစွာပဲ၊ သင်လုပ်ရန်ကြော်ငြာရုံထက် ပို၍ စျေးကြီးသောဗွီဒီယိုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
ဇွန် 22, 2015 မှာ 10: 45 pm တွင်
ကျွန်ုပ်၏ iPhone မှဗွီဒီယိုတစ်ခုကိုအခမဲ့တင်နိုင်သည်။ မဟုတ်ဘူး။
E-Liquid UK စတိုး
ဇွန် 26, 2015 မှာ 9: 50 pm တွင်
ကောင်းတဲ့ post၊ YouTube ဟာ link တွေ၊ အသိအမြင်တွေအတွက်ထူးခြားတဲ့အရင်းအမြစ်တစ်ခုပါ။
29:2015 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 5, 58 တွင်